Madaxwyanaha Maraykanka Obama iyo Ra,iisal Wasaaraha Dalka Itoobiya oo Si Wada jira uga Wada hadlay Dagaalka Lagula Jiro Xarakada Alshabaab. - Haldoornews
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo RW Itoobiya, Hailemariam Desalagn oo kawada hadlay Xxaaladda Soomaaliya ayaa Ammaan u jeediyay ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jira xoogagga Al-shabaab.
Obama iyo Desalagn oo shir jaraa’id wadajir ugu Qabtay Addis Ababa shalay ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay door wanaagsan ka qaateen howlgalka AU-da ee Somalia, isagoo bogaadiyay horumarka laga gaaray Dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Sidoo kale, Obama ayaa isna cambaareeyay Weerarkii Al-shabaab ka geysteen Muqdisho, wuxuuna sheegay in Al-shabaab ay u taagan tahay burbur iyo inay wax dilaan.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweyne Obama ay isla garteen in laga Shaqeeyo Dhismaha Nabadda Somalia iyo in Hay’adaha Dowladda FS la Taageero, isla markaana la xojiyo ciidamada Somalia.
“Waxaa isla-garannay inaan kawada shaqeyno nabada Soomaaliya, innagoo ka caawinayna dhismaha hay’adaha dowladda, isla markaana xoojineyna ciidamada Amniga Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas’uuliyada Amaanka dalkooda,” ayuu Desalagn yiri.